६० वर्षअघिको मर्यादाक्रम : मन्त्री र प्रधानन्यायाधीशभन्दा विदेशी राजदूत माथि – MySansar
६० वर्षअघिको मर्यादाक्रम : मन्त्री र प्रधानन्यायाधीशभन्दा विदेशी राजदूत माथि
अहिलेको मर्यादाक्रम बारे मैले अस्ति नै ब्लग लेखेको थिएँ। भर्खरै ६० वर्षअघिको २०१३ सालको राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रम भेटियो। त्यतिबेला राजतन्त्र थियो। त्यसैले स्वभावतः राजा र राजपरिवारको मर्यादाक्रम माथि हुने नै भयो। अचम्म त विदेशी राजदूतको मर्यादाक्रम पो रहेछ। त्यतिबेला विदेशी राजदूतको मर्यादाक्रम छैटौँ नम्बरमा अर्थात् प्रधानमन्त्री लगत्तै रहेछ। मन्त्रीहरु र सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशभन्दा पनि माथि। अहो, हामीले विदेशी राजदुतहरुलाई भाउ दिन त त्यतिबेलैदेखि थालेका रहेछौँ। अहिले भने विदेशी राजदूतको मर्यादाक्रममा १५ औँ स्थानमा छ। हेर्नुस् ६० वर्षअघिको मर्यादाक्रम
अहिलेको मर्यादाक्रम भने यस्तो छ-
7 thoughts on “६० वर्षअघिको मर्यादाक्रम : मन्त्री र प्रधानन्यायाधीशभन्दा विदेशी राजदूत माथि”
२००७ सालमा दिल्ली सम्झौता बात बनेको नेपालि नागरिकहरुले लखेट्न चाहेको मोहन समशेरकै नेतृत्वमा भारतमै हुर्केको मात्रिका बिपी र भारतको बिहारमै जन्मेको गिरिजाको कांग्रेसको मिलिजुली सरकार बने/ तेतिबेलाको कांग्रेसको सरकारको मन्त्रीमंडल को बैठक समेत भारतीय राजदुतको उपस्थितिमा मात्रै भय बाटै देखिन्छ कांग्रेसीहरुको अघोसित रुपमै भारतीय राजदुतलाई आफ्नो “सर्वोच्च……” मानेको थियो/ स्वतन्त्र नेपालको अधिकारमा बन्देज लगाउने सन् १९५०को सन्धि गर्ने गराउने भारत निर्देशित कांग्रेसीहरुले निमित भारतको राजदुत नेपालको न्यायधिस भन्दा बढी मर्यादित मान्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होईन/
२००७ साल देखि जत्ति पटक पनि कांग्रेसीको सरकार बने तिनीहरुले जस्तो जस्तो सन्धि सम्झौताहरु भारत सिट गरे जसरि उनीहरुले नेपालको आन्तरिक राजनिनैतिक मुद्दाहरु दिल्ली सम्झौताको आधार मा गर्दै आय, जसरि नेपाल पसे जत्तिको बिहारीलाई नेपालको नागरिकता दिलाय, जसरि उनीहरुले बहुजातीय बसोबास भयको तराईको नाम र पहिचान मिताउन्दै समस्त तराईलाई भोलि आत्म निर्णयको नामामा भोलि नेपाल बात अलग्गिन समेत सकिने “स्वायत मधेश प्रदेश” बनाउन दिने सम्झौता हरु गरे, जसरि कांग्रेसी सरकारको पालामा भारतको उत्पादन सिट प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली उद्द्योगहरु बन्द हुँदै गय, जसरि २०४५/४६ सालमा भारतको नाकाबन्दीलाई असफल बनाउन अहम भूमिका खेलेको शाही नेपाल बायु सेवा निगम धोस्त बनाउन धमिजा लाउदा काण्ड हरु गरे र अहिले देउपा भारत बात फर्केको लगतै भारत र मधेशबादीले हटाउन चाहेको ओलीको नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध लागे बात स्पस्ट गर्छ कांग्रेसको सरकार नेपाललाई होईन बिहार र बिहारीको बिकाशको निमित नेपाललाइ प्रयोग गर्न बन्छ र उनीहरुको निमित दिल्लीको सदन नै असली सिंहदरवार हो र उनीहरु गणेशमान जस्तोलाई होइन दिल्लीको ठुला नेता र तिनीहरुको राजदुतलाई ठुला मान्थे भन्ने कुराको प्रमाण हो यो/
मर्यादा क्रम मा प्रचण्ड र ऋषि धमला छुटे छन् …
मर्यादा क्रम नै हेर्ने हो भने जनता द्वारा निर्बाचित सभामुक प्रधान नयधिस भन्दा माथि हुनु पर्ने हो |
अहिलेको मर्यादा क्रममा पनि ६ नं मा गलत विवरण रहेछ । पूर्व राष्ट्रपति संगै पूर्व उप राष्ट्रपति हुनु पर्नेमा उप प्रधानमन्त्री भएछ ।
यो मर्यादाक्रम बनाउने तेइ नाम मात्र को नेपाली कांग्रेस त होलानी ?
विदेशी राजदूतमा पनि भारतीय र अमेरिकी राजदूतको वरियता माथि भन्ने चाहिँ रहेनछ ?
त्यतिबेला त भारतीय राजदूत क्याबिनेटमै बस्थे भन्ने सुनिन्छ नि के हो कुरो?
मित्र, बिदेशि राजदुतहरु क्यीबिनेट मन्त्री भन्दा ठुलो भएको देखिएन ? अनि चहेमा क्यीबिनेटमा बस्न कुन ठुलो कुरा भयो ?
सबभन्दा रोचक त रानि भन्दा युबराज ठुलो, देश चलाउनुपर्ने प्र.म. भन्दा फोकटको भत्ता खाएर बस्ने तर आफ्नो नाकको सिंगान फाल्न नसक्ने राजकुमारहरु ठुलो । मलाइ आफ्नो खुट्टामा आफैले बंचरो हान्ने ज्ञाने पनि सुस्त मनःस्थिति जस्तो लाग्छ ।